Kuwani waa fursadaha lagu cusboonaysiin karo iMac Pro markii la kala gooyay | Waxaan ka socdaa mac
Mar kasta oo la soo saaro nooc cusub oo Mac ah, dhawr saacadood gudahood ayaa kartida isticmaale si kor loogu qaado qaybaha gudaha mustaqbalka, sida ay tahay: RAM-ka, diskiga SSD-ka iyo maxaa diidaya, moodellada dhamaadka-sare, suurtagalnimada in la beddelo kaarka muuqaallada. Waa run in mid ka mid ah faa'iidooyinka Macs ay tahay inay umuuqato in sanaduhu aysan si dhakhso ah u dhaafin marka loo eego alaabooyinka kale ee tikniyoolajiyadda, laakiin isla mar ahaantaana, dadka isticmaala qaarkood waxay u baahan yihiin awood dheeri ah iyo awood dheeri ah, marka la eego dalabyada ay hawlahoodu u baahan yihiin.
Shirkadda Mac-da ka kooban ee OWC, waxay muujisay xiisaha ay u leedahay ogaanshaha qaabeynta gudaha ee iMac Pro cusub, sababtoo ah sida laga soo xigtay macluumaadka, way ka duwan tahay midka loo yaqaan 'iMac 5k'. OWC, oo dhaqan ahaan soo saare ka ah RAM iyo SSD memory, ayaa la wadaagay khibrada iyo Soy de Mac, waanu kuu sheegi doonaa.
Qaabka la doortay waa midka ugu aasaasiga ah ee loo yaqaan 'iMac Pro'. Laga bilaabo RAM, qaabkani wuxuu ku yimaadaa heerka 32 GB. Bari iMac Pro wuxuu leeyahay afar saldhig oo DIMM ah oo ku dhaji 8GB mid kasta oo ka mid ah. Wax walba waxay muujinayaan in qaabdhismeedku isku mid yahay moodooyinka kor u kaca 64 GB iyo 128 GB.
Sida loogu talagalay xusuusta SSD, qaabka gelitaanka ee iMac Pro wuxuu leeyahay 1TB, oo ka kooban laba 512GB saxan. In qaab RAID ah. Xagga sare, waxaa ku yaal qafis korkiisa leh fur, kaas oo sida muuqata lagu kala goyn karo shaandheeye iyo xusuusta oo la beddelay.
Ugu dambeyntiina, in kasta oo ay leedahay processor weyn, iMac Pro-kani wuxuu leeyahay suurtagalnimada in la beddelo haddii ay dhacdo dhacdo lama filaan ah, sida processor-ka looma iibin Motherboard-ka. Marka, waxay fulineysaa ballanqaadyada shirkadda ee ah inay yeelaneyso Mac halkaas oo dhammaan qeybaha la beddeli karo, taasoo dammaanad ka qaadaysa xasiloonida maskaxda qofka helay.
Sidaa darteed, hal dhinac waxaan haynaa iMac Pro taas way fududahay in lakala furfuro intay markii hore umuuqatay, maaddaama ay tilmaameen in Kaliya Barnaamijku kala furfuri karo qalabkan. Waxaan haysannaa tabeello saldhig ah in la isku daro labada xusuus cusub ee RAM iyo SSD. Laakiin wali kuma dhiiran karno inay kooxdeennu gudaha ku diyaarsanaan doonaan isbeddellada noocaas ah. Ama taa bedelkeeda, shuruudaha kale ee qalabka ayaa ka hortagaya cusbooneysiinta qaybaha qaarkood.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, ilaa laga xaqiijiyo howl qabadka qaybaha sadexaad, OWC lafteeda ayaa tilmaameysa waxyaabaha soo socda:
Iyadoo la tixgelinayo qiimaha ganacsi ee hooseeya ee ikhtiyaarka saldhigga ah, oo lagu daray 32GB, qiimaha hadda ee xirmo dhan 64GB ama 128GB, iyo shaqada ku lug leh kor u qaadista, waxaan dhihi karnaa waxaan xilligan kugula talinaynaa inaad iibsato iMac Pro oo leh qadarka xusuusta aad u malaynayso in loo baahan doono. In kasta oo ay faa'iido weyn tahay in ikhtiyaar loo yeesho mustaqbalka, maanta faa iidada dhaqaale waa yar tahay marka loo eego kala duwanaanshaha qiimaha warshadda si kor loogu qaado 32GBas. Waqti ka dib, farqigaani wuxuu u eg yahay inuu korayo waxaana jiri doona faa iido dhab ah.
Wixii warar ah ee arrintan la xiriira waan idin soo gudbin doonnaa, maadaama qaar badani ay go'aan ka gaaraan inay iibsadaan Mac ama mid kale iyadoo lagu saleynayo fursadaha ballaarinta ama beddelka qaybaha gudaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Kuwani waa fursadaha cusbooneysiinta ee iMac Pro mar la kala daadiyay
Waxaan jecelahay in kordhintan la sameyn karo, horeyba wey uga badan tahay sida caadiga ah Apple marka wax horumar ah waa la soo dhaweynayaa.